Otu esi achọ PDF | Ngwa akụkọ
Laura Torres ebe obibi | 12/05/2022 11:21 | General, software
Ịkwesịrị ịchọ okwu na PDF dị ogologo mana ị maghị ka esi eme ya? Chezọ usoro isi nke iji aka mee ya, ịga na ibe site na ibe ruo mgbe ịchọtara okwu ahụ, enwere ụzọ dị mfe ma dị mfe iji chọọ PDF.
Ya mere, n'isiokwu a, anyị ga-akọwa nzọụkwụ site nzọụkwụ esi chọọ PDF jiri ọmụmaatụ ka ị ghara inwe nsogbu ịchọta okwu na faịlụ nwere ndọtị a.
Ebe ọ bụ na ọ ghọrọ usoro mepere emepe, akwụkwọ PDF aghọwo ihe a na-ahụkarị n'ihi na nọgide na-eguzosi ike n'ezi ihe nke imewe gị n'agbanyeghị ngwaọrụ a na-ele ya: kọmputa, smartphone, mbadamba, wdg.
Mgbe ụfọdụ ị ga-achọ otu okwu n'ime akwụkwọ PDF iji kwado eziokwu, chọta ozi dị mkpa, ma ọ bụ naanị n'ihi ọchịchọ ịmata ihe. Ọ dabara nke ọma, nke a bụ ọrụ dị ngwa ma dị mfe.
Iji chọọ okwu na PDF, anyị ga-eji ngwa Adobe gọọmentị, ụlọ ọrụ ahụ mepụtara usoro PDF. Adobe Acrobat Reader DC bụ mmemme efu, nke gụnyere igwe nchọta nke ọma, ọ bụkwa n'asụsụ Spanish, nke na-eme ka ihe dịrị anyị mfe.
1 Tupu ịmalite: Budata mmemme
1.1 Nzọụkwụ mbụ: Otu esi achọ PDF maka otu okwu ma ọ bụ okwu.
1.2 Nzọụkwụ nke abụọ: ọchụchọ ndị ọzọ akọwapụtara
2 Chọta ederede n'ọtụtụ akwụkwọ PDF
2.1 Chọọ n'ọtụtụ faịlụ n'otu oge: usoro ị ga-eso
3 Kedu otu m ga-esi lelee ma chekwaa nsonaazụ ọchụchọ?
Tupu ịmalite: Budata mmemme
Ọ bụrụ na ị nweghị mmemme arụnyere na-agụ PDF, ị nwere ike budata ya Acrobat Reader DC site na webụsaịtị gị. Kpachara anya, n'ihi na site na ndabara ọ na-ebudata ma tinye antivirus McAfee. Ọ bụrụ na ị nweghị mmasị, wepụ nhọrọ a.
Ozugbo mmemme arụnyere, gaa na menu Aha ma mepee PDF ebe ị chọrọ ịchọ. Ọtụtụ oge, n'ihi nhazi usoro, faịlụ ahụ ga-emeghe na Acrobat Reader DC ozugbo mgbe ịpịrị akwụkwọ ahụ.
Nzọụkwụ mbụ: Otu esi achọ PDF maka otu okwu ma ọ bụ okwu.
Ọzọ, ị ga-aga na n'elu menu Dezie wee pịa nhọrọ Buscar n'akụkụ akara binoculars. Ụzọ ọzọ dị ngwa ngwa bụ iji iwu ahụigodo ma ọ bụrụ na-amasị gị:
pịa iwu Ctrl + F ọ bụrụ na ị na-eji Windows ma ọ bụ Mmmmmmmmmmmm ọ bụrụ na ị na-eji Mac, windo ọchụchọ ga-emeghe ebe ị nwere ike pịnye okwu ịchọrọ ịchọ. Iji cheta iwu a, ị nwere ike iche echiche ọchụchọ Bekee: "chọta", ya mere, mkpụrụedemede mbụ nke okwu ahụ bụ nke na-eso CTRL.
Nzọụkwụ nke abụọ: ọchụchọ ndị ọzọ akọwapụtara
Maka ịchọ nkọwa zuru ezu, pịa CTRL + Shift + F na Windows ma ọ bụ CMD + Shift + F na Mac. Nke a ga-emeghe ọchụchọ dị elu:
*”Shift” na-ezo aka na igodo ị na-eji pịnye otu mkpụrụedemede ukwu, nke gụnyere akara akụ elu. Igodo dị n'elu Ctrl.
Lee ị nwere ike ịchọ akwụkwọ PDF niile n'ime otu nchekwa, ọ bụghị naanị folda dị ugbu a. Ị nwekwara ike ịchọ okwu, ibe edokọbara na nkọwa niile. Ọzọkwa, e nwere igbe nrịbama iji gosi ma ọ bụrụ na ịchọrọ dakọtara mkpụrụedemede ukwu na obere mkpụrụedemede.
Chọta ederede n'ọtụtụ akwụkwọ PDF
Acrobat Adobe PDF na-aga n'ihu, ị nwere ike ịchọ ọtụtụ akwụkwọ n'otu oge!. Window ọchụchọ na-enye gị ohere ịchọ okwu n'ọtụtụ akwụkwọ PDF n'otu oge. Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịchọ akwụkwọ PDF niile ma ọ bụ mepee Pọtụfoliyo PDF n'otu ebe. Ị ga-eburu n'uche na ọ bụrụ na ezoro ezo akwụkwọ ndị ahụ (etinyere usoro nchekwa), enweghị ike itinye ha na nchọta. Ya mere, ị ga-emepe akwụkwọ ndị a otu otu ka ịchọọ faịlụ ọ bụla n'otu n'otu. Agbanyeghị, dọkụmentị edebanyere dịka Adobe Digital Editions bụ ihe wezugara n'iwu a yana enwere ike itinye ya na otu akwụkwọ iji chọọ. Mgbe nke a gasịrị, anyị na-aga ebe ahụ.
Chọọ n'ọtụtụ faịlụ n'otu oge: usoro ị ga-eso
Mepee Acrobat na desktọpụ (ọ bụghị na ihe nchọgharị weebụ).
Mee otu n'ime omume ndị a.- Na search toolbar, pịnye ederede ị chọrọ, wee họrọ Mepee ọchụchọ zuru oke nke Acrobat na menu mmapụta - n'ime igbe ọchụchọ, pịnye ederede nke ịchọrọ ịchọ.
Na mpio a, họrọ akwụkwọ PDF niile. Na menu mmapụta dị n'okpuru nhọrọ, họrọ chọọ ebe.
Họrọ ebe na kọmputa gị ma ọ bụ na netwọk wee pịa anabata.
Iji kọwapụta njirisi ọchụchọ agbakwunyerepịa Gosi nhọrọ di elu ma kọwaa nhọrọ ndị kwesịrị ekwesị.
Dị ka ndụmọdụ, n'oge ọchụchọ, ị nwere ike pịa rịzọlt ma ọ bụ jiri iwu ahụigodo ka ịpịgharịa na nsonaazụ ya na-akwụsịghị ọchụchọ ahụ. Ọ bụrụ na ị pịa bọtịnụ Kwụsị N'okpuru ogwe ọganihu, a kagbuola ọchụchọ ahụ yana nsonaazụ ya bụ naanị na ihe omume ndị a hụrụ ugbu a. Window ọchụchọ anaghị emechi yana ndepụta nsonaazụ anaghị ehichapụ. Ya mere, ka ịhụkwu nsonaazụ, ị ga-eme ọchụchọ ọhụrụ.
Kedu otu m ga-esi lelee ma chekwaa nsonaazụ ọchụchọ?
Mgbe ịmechara ọchụchọ site na mpio ọchụchọ, a na-egosipụta nsonaazụ ya n'usoro ibe, na-achịkọta n'okpuru aha akwụkwọ ọ bụla achọtara. Ihe ọ bụla n'ime ndepụta ahụ gụnyere okwu gbara ya gburugburu (ọ bụrụ na ọdabara) yana akara ngosi na-egosi ụdị ihe merenụ.
Gaa na otu ihe atụ na nsonaazụ ọchụchọ. Enwere ike ịme ya naanị na PDF n'otu n'otu.
– Gbasaa nsonaazụ ọchụchọ, ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Wee họrọ ihe atụ na nsonaazụ ka ịlele ya na PDF.
- Ka ịhụ ihe atụ ndị ọzọ, pịa ihe atụ ọzọ nke nsonaazụ ya.
Hazie ihe atụ na nsonaazụ ọchụchọ. Họrọ nhọrọ menu Iwu site na ala nke mpio ọchụchọ. Ị nwere ike hazie nsonaazụ ya site na mkpa, ụbọchị emezigharịrị, aha faịlụ, ma ọ bụ ọnọdụ.
Chekwaa nsonaazụ ọchụchọ. Ị nwere ike ịchekwa nsonaazụ ọchụchọ gị dị ka faịlụ PDF ma ọ bụ CSV. Ejiri tebụl mebere faịlụ CSV, yabụ imepe ya, ị ga-eji mmemme Excel mee ya. Iji mechaa, pịa akara ngosi diskette wee họrọ ịchekwa nsonaazụ dịka PDF ma ọ bụ chekwaa nsonaazụ dịka CSV.
Enwere m olileanya na ozi a bara uru nye gị, dịka ị na-ahụ, ịchọta okwu na PDF bụ ọrụ dị mfe.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » software » Na-achọ na PDF